Banky foiben’i Madagasikara : tsy azo anaovana hosoka ireo vola vaovao | NewsMada
Banky foiben’i Madagasikara : tsy azo anaovana hosoka ireo vola vaovao
Anisan’ny mampiavaka ireo vola vaovao havoakan’ny Banky foiben’i Madagasikara ny kisary mivoitra azo tsapain-tanana. Hita ao anatin’izy ireo koa ny mampiavaka an’i Madagasikara amin’ny lafiny samihafa.
Mizara roa ny fotoana hamoahan’ny Banky foiben’i Madagasikara (BFM) ny ravimbola vaovao eto amintsika. Hivoaka amin’ny alatsinainy 17 jolay ho avy izao ny ravimbola voalohany amin’ilay vola vaovao 20.000 Ar, eo koa ny 10.000 Ar sy ny 5.000 Ar ary ny 2.000 Ar. Hivoaka amin’ny 18 septambra kosa ny 1.000 Ar, ny 500 Ar, ny 200 Ar ary ny 100 Ar.
Mampiavaka ireto ravimbola vaovao ireto ny tsy ahafahana anaovana vola sandoka. Mivoitra ny soratry ny vola, ka azo tsapaina amin’ny tanana. Misy kisary mivoitra, toy izany, koa amin’ny fanoratry ny jamba sy ny manana fahasembanana amin’ny fahitana. Ahitana kisary manokana miova ny lokony rehefa asompirana ny vola. Manaraka izany, mbola hita ireo sarin’omby famantarana ny vola malagasy hatramin’izay, sy ny kofehy madinika manjelatra.
Manampy ireo, manana fitaovana fitiliana sy fanamarinana ravimbola ny matihanina, mpikirakira vola, toy ny banky, ny sampandraharaham-panjakana mikirakira vola, toy ny tahirimbolam-panjakana, ny hetra, sns. Misy soratra madinika ao anatiny ka tsy hita raha tsy tarafina amin’ny fitaovam-pitiliana manalehibe (loupe).
Maro ny sary hita ao anatin’ireo ravim-bola, indrindra ny mampiavaka an’i Madagasikara. Hita amin’ilay ravimbola 20.000 Ar ny sarin’ny Tetikasa Ambatovy sy ny vokatra ara-pambolena, amin’ny 10.000 Ar ny seranan-tsambon’i Ehoala sy ny karazana zavamaneno malagasy. Hita any amin’ny hafa ny rovan’Ambohimanga, ny trozona, ny sahona mena, ny riandranon’i Lily, sns.
Nanamarika ny governoran’ny BFM fa hisy ny fampahafantarana manerana ny Nosy mikasika ireo vola ireo. Efa maherin’ny 10 taona ny vola miparitaka eto amintsika, ka ao anatin’ny fenitra iraisam-pirenena ny hanovana azy. Tsy namoaka tetibola manokana ny BFM sy ny fanjakana tamin’ny fanaovana azy. Orinasa telo any Eoropa no voasivana tamin’ny fanontana azy.